Qofkii Stockholm isku qarxiyay oo la aaminsanyahay in uu Ciraaqi ahaa | Somaliska
War cusub: Website lagu magacaabo Shumukh al-Islam ayaa soo bandhigay sawirka nin ay ku sheegayaan magaciisa Taymour Abdel Wahab oo ay leeyihiin "Waa walaalkeen oo fuliyay jihaadka Stockholm". Qaraxii sabtida ka dhacay Stockholm ayaa la aaminsanyahay in uu fuliyay nin 29 [caption id="attachment_994" align="alignright" width="300" caption="Timur Abdul Wahab"] [/caption] jir oo deganaa magaalada Tranås. Gaariga qarxay ayaa la sheegay in uu ninkaan uu lahaa asagoo ka shaqeyn jiray agagaarka goobta qaraxu ka dhacacy. Ninkaan ayaa la sheegay in uu ka soo jeeday dalka Ciraaq asagoo maanta ay boolisku baaritaan ku hayeen gurigiisii. Ninkaan ayaa la sheegay fariin uu u qoray reerkiisa uu kaga hadlayay safar uu ku tagay bariga dhexe asagoo yiri "Bariga dhexe uma aadin in aan ka shaqeysto ama lacag balse waxaan u aaday Jihaad". Ninkaan ayaa la sheegay in uu lahaa reer asagoo sidoo kale ay u joogeen 2 caruur ah. Waxa uu wax ku soo bartay jaamacad ku taala magaalada Luton ee dalka Ingiriiska. The Local
War cusub: Website lagu magacaabo Shumukh al-Islam ayaa soo bandhigay sawirka nin ay ku sheegayaan magaciisa Taymour Abdel Wahab oo ay leeyihiin “Waa walaalkeen oo fuliyay jihaadka Stockholm”.
Qaraxii sabtida ka dhacay Stockholm ayaa la aaminsanyahay in uu fuliyay nin 29
Timur Abdul Wahab
jir oo deganaa magaalada Tranås. Gaariga qarxay ayaa la sheegay in uu ninkaan uu lahaa asagoo ka shaqeyn jiray agagaarka goobta qaraxu ka dhacacy.
Ninkaan ayaa la sheegay in uu ka soo jeeday dalka Ciraaq asagoo maanta ay boolisku baaritaan ku hayeen gurigiisii. Ninkaan ayaa la sheegay fariin uu u qoray reerkiisa uu kaga hadlayay safar uu ku tagay bariga dhexe asagoo yiri “Bariga dhexe uma aadin in aan ka shaqeysto ama lacag balse waxaan u aaday Jihaad”.
Ninkaan ayaa la sheegay in uu lahaa reer asagoo sidoo kale ay u joogeen 2 caruur ah. Waxa uu wax ku soo bartay jaamacad ku taala magaalada Luton ee dalka Ingiriiska.